Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo xagaaga garaacana on albaabada iyo dadka ayaa qorsheyneysa inay qaataan fasaxa xagaaga qabow meelo kala duwan. Boos celinta tikidhada tareenkaagu wey adkaan laheyd maadaama saf dheer la geli doono iyo haddii aad raadineyso bedel xiiso leh…
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Anigu waxaan ahay Musaafurka aad u xiiseeya iyo in aad u socoto ah Solo. Waxa ugu fiican ee ku saabsan tan oo ah inaad aragto adduunka oo aadan sugin inuu qofna helo lacag la'aan ka dibna uu qorsheeyo safar oo aad u qaadato waxyaabaha ku habboon…
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Ma jeceshahay safraya tareen? Ma jeceshahay arkaya qalcado la yaab leh in dal sida France? Haddii ay taasi kiiska, ka dibna aad gaadhay meel sax ah. Taasi waa maxaa yeelay this article “10 Jiidasho iyo Daar wayn In France By tareenka” wuxuu ku siin doonaa liis sugan oo ah…
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Haddii aad tahay lover biir ah ku heysa inay qaadato hamiday wadada ama aad hore u leedahay safar Yurub on buugaagta, fiiri Jidka Beer ee Tareenka – Qamri ugu fiican Yurub By tareenka. ma ceeboobi doono in aad! xitaa wanaagsan,…